Tamin’ny fikambanan-jiolahy mpanatanteraka fanafihana tranombarotra sy famakiana trano any Toamasina izy ireo. Tsahivina fa nisy nanafika ny tranombarotra mpamongady zava-pisotro iray tao Tanambao V, tamin’ny fiandohan’ny volana mey teo, vola mitentina eo amin’ny 10 tapitrisa ariary no lasa. Araka ny vaovao ofisialin’ny polisim-pirenena, nisy tamin’ireo jiolahy nanao ny fanafihana no efa voasambotra fa nisy kosa ny tafatsoaka ary nokarohina. Andro vitsivitsy taorian’izay, ny alin’ny alatsinainy 6 hifoha talata 7 mey 2019 tokony ho tamin’ny 1 ora maraina, dia lasibatry ny andian-jiolahy ihany koa ny tokantranon’ny vehivavy iray monina ao Salazamay. Nisy tamin’ireo jiolahy nanao ny fanafihana anefa no tadidin’ilay vehivavy ny endriny. Rehefa natao ny fikarohana ary nanampy ny fanomezam-baovao ireo olona tsara sitrapo, dia voasambotra ireo olona dimy lahy anisan’ny voarohirohy tamin’ny fanafihana. Misy amin’izy ireo no nanao mpitsikilo nandritra ny fanafihana ary nisy ny nanao fanafihana mivantana.